Boqor Burhaan oo lacag ugu deeqay dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo(Sawiro) – Puntland Chamber of Commerce
Boqor Burhaan oo lacag ugu deeqay dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo(Sawiro)
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	30th April 2015
Boqor Burhaan boqor Muuse boqorka beelaha Daarood ayaa maanta ugu deeqay 10,000 oo doolar mashruuca lagu dhisaayo wadada isku xirta Ceeldaahir iyo Ceerigaabo.
Munaasabaddii lacagtaasi lagu wareejinayey gudiga qaabilsan dhismaha wadada ayaa ka dhacday xarunta rugta ganacsiga iyo wershadaha Puntland, waxaana ka soo qeyb galay ganacsato, culimo’udiin, maamulka rugta, aqoonyahano, waxgarad Axmad Maxamuud Ducaale wakiilka boqorka iyo marti sharaf kale.
Cali Ceelaayo oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga mashruuca Ceeldaahir iyo Ceerigaabo oo ugu horeyn ka hadlay xafladda ayaa sheegay in boqorka uu yahay qofkii ugu horeeyey ee reer Puntland ah oo bixiya qaaraanka lagu dhisaayo wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo
…Waxaan leenahay boqorka Ilaahay ajer aad u farabadan ha kaaga abaalmariyo ayuu hadkiisa ku daray Cali Ceelaayo.
Maxamuud Caydiid Dirir gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga oo isna ka hadlay xafladda ayaa sheegay in shacabka reer Puntland looga fadhiyo in ay ka qeyb qaataan mashruuca lagu dhisaayo Ceeldaahir iyo Ceerigaabo.
…Sidaa wada ognahay boqorka waxa uu ka qeyb qaatay midnimada umadda Soomaaliyeed, waxaana leenahay boqorka Ilaah ha xifdiyo, waana kaaga mahad celinaynaa taakulada aad ku darsatay mashruuca lagu dhisaayo wadada ayuu yiri Maxamuud Caydiid Dirir.
Waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay wakiilka boqorka Axmad Maxamuud Ducaale oo sheegay in wadada ay tahay mid ina anfacaysa , waana hubaa in la dhisi karo haddi aan isku duubnaano.
Si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa ah mid muhiim u ah dadka reer Puntland iyo gud ahaan Soomaaliya.